Yuusuf Xuseen Jimcaale oo loo magacaabay Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Banaadir – STAR FM SOMALIA
Wararka ayaa sheegaya in Guddoomiyaha cusub Gobolka Banaadir iyo Duqa Muqdisho loo magacaabay Yuusuf Xuseen Jimcaale, kadib markii xilkaas laga qaaday Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab).
Sida ay sheegayaan wararka warqada magacaabista Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho ayaa goor dhow ka soo baxday Xafiiska Madaxweynaha, waxaana saacadaha soo socda lagu wadaa in si rasmi ah ay Wasaaradda Arrimaha Gudaha u shaaciso.
Afhayeenka Madaxweynaha Daa’uud Aweys ayaa xaqiijiyay in Xasan Maxamed Xuseen Muungaab xilka laga qaaday, isla markaana Madaxweynuhu uu u magacaabay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale.
Ilo ku dhow dhow Guddoomiyaha cusub ee la magacaabay ayaa u xaqiijiyay in Mr Yuusuf uu gacanta ku heysto warqadiisa magacaabista, uuna kaliya sugayo in Wasaaradda Arrimaha Gudaha ay si rasmi ah uga dhawaaqdo.
Magacaabistan ayaa ku soo beegantay saacado ka hor safar Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu gelinka dambe ee maanta ugu ambabixi rabo Boqortooyada Sacuudiga Carabiya.
Guddoomiyaha cusub ee la magacaabay Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa ku soo waxbartay dalka Masar, waxaana uu ka mid ahaa Xisbigii Madaxweyne Xasan Sheekh ee PDP, isagoo ka ahaa Xoghayaha Arrimaha Gudaha.